Mogadishu Journal » 2018 » September » 7
Dawladda Soomaaliya oo maamul goboleedyada xisaab-celin ka dalbatay
Mjournal :-Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada ku shirsan Kismaayo ka codsatay in ay keenaan xisaab-celin ku aaddan “isticmaalka lacagaha dawladda dhexe ay u gudbiso dawlad goboleedyada”. Warqad todobaadkan ka soo baxday xafiiska wasiirka...
Khasaare ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Qardho
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno magaalada Qardho ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasi uu ka dhacay qarax jugtiisa laga maqlay qeybo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi. Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen in marqura ay maqleen jugta qarax xoogan, intaasi...
Qarax ciidanka AMISOM lagula eegtay Shabeellaha Hoose
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kolonyo ka tirsan ciidanka AMISOM oo qarax miino lagula eegtay degaanka Shalambood oo ka tirsan gobolka Shaberellaha Hoose. Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay arkeen qaraxa kadib mid ka mid ah gaadiidka...
Mjournal :-Baarlamaanka Dawlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta ansixiyey go’aanno masiiri ah oo la hadal hayey tan iyo markii la magacaabay madaxweynaha cusub, Mustafe Muxumad Cumar (Cagjar). Baarlamaanka oo saaka yeeshay fadhi aan caadi ahayn, ayaa waxay ku doorteen afhayeenka...
Neymar Jr oo loo magacaabay Captain-ka joogtada ah ee Brazil
Mjournal :-Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Da Silva jr ayaa loo magacaabay Captain-ka joogtada ah ee xulka qaranka Brazil hooggaamin doona. Neymar ayaa aaminsan in hor kicista xulka Jaalleyaasha masuuliyaddooda ay tahay mid isaga u fiican. Macallin Tite ayaa...
Wasiirka arrimaha dibedda Eritrea oo la kulmay madaxweynaha Jabuuti
Mjournal :-Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay oo khamiis aheyd waxaa uu Aqalka Madaxtooyada ku qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea Cusmaan Saalax oo ka mid ahaa wafdiga Wasiirada Arrimaha Dibadda Itoobiya iyo Soomaaliya ee gaaray Jabuuti. Madaxweyne...
Jabuuti iyo Ertetrea oo gaaray heshiis horu-dhac ah
Mjournal :-Dowladaha Jabuuti iyo Eretrea ayaa Shalay gaaray heshiis horudhac ah oo u Gogol-xaaraya in lasoo Af-jaro colaaddii muddo ka taagnayd xadlka ay wadaagaan Labada Dal ee dhalisay Gacan ka hadalka. Colaadda Labada dhinac oo salka ku haysa duullaankii ay Eretrea ku qabsatay...
QM oo soo saartay warbixin ka hadlaysa xorriyada hadalka Soomaaliya
Mjournal :-Qaramada Midoobay ayaa soo saartay warbixin ay ugaga hadlayso xoriyada hadalka ee dalka Soomaaliya iyadoo warbixinta lagu sheegay in horumar laga sameeyay xoriyada hadalka balse weli loo baahan yahay in la sii hormariyo. Halkan hoose ka aqriso warbixinta oo...
Baarlamaanka dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya oo kulan yeelanaya
Mjournal :-Golaha baarlamaanka dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta waxa ay magaalada Jigjiga ku yeelanayaan kulan caadi aheyn, sida ay inoo sheegeen masuuliyiin ka tirsan DDSI. Arrimaha maanta looga hadlayo kulanka ayaa waxaa qeyb ka noqon doona magacaabidda...